Ukwamkelwa kunikwe wena, Igunya lithathwa nguwe | Martech Zone
Kule veki, bendinencoko emangalisayo nomlingane oselula kwishishini lokuthengisa. Umntu wayekhathazekile. Babengcali kushishino kunye neminyaka yeziphumo ezintle. Nangona kunjalo, babedla ngokungahoywa xa kufikwa kumathuba okuthetha, ukucebisa, okanye ukuthathelwa ingqalelo ziinkokheli.
Kwiminyaka engama-40 ubudala, wam Igunya yeza mva kakhulu kunenkokheli ezininzi ezaziwayo kwindawo yokuthengisa. Isizathu silula- bendisebenza ngokuzimisela, ndinemveliso ndenza iinkokheli zamashishini endincedileyo ukuba ndizuze igunya. Ndiphuhlise iingxelo zeshishini ezenza ukuba zibe ziincwadi kunye nemiboniso ephambili enegama layo. Ndiqale amashishini endingawachazanga njengomsunguli wawo. Ndijonge njengokuba abantu endixela kubo bekonyuselwa kwaye behlawulwa kakuhle, ngelixa bendisebenza kubo. Uninzi lwazo luzizityebi.
Andibasoli. Ndiyayixabisa into endiyifundileyo ndibabukele. Ngapha koko, ndingabahlobo abalungileyo kuninzi lwabo namhlanje. Kodwa kuwo wonke umsebenzi wam, ndandilindele ukuba ndibekho yamkelwe njengegunya. Esona sifundo sokugqibela endisifundileyo ekugqibeleni emva kokubabukela kukuba baba ngabasemagunyeni kuba khange balinde ukwamkelwa. Bathatha igunya labo.
Sukuyitolika gwenxa njengoko beyithathile ukususela kum. Hayi, bayithathe kwishishini. Ukwamkelwa akuzange kufike kuqala, kwaza emva koko. Babengenakunqandwa ekufumaneni ukukhanya. Xa bekukho umsitho ekumele bathethe kuwo, babedlala ibhola ekhatywayo ukufumana elona xesha lifanelekileyo, kwaye baqinisekisa ukukhuthaza… nangaphezulu kokukhuthaza ukubandakanyeka kwabo. Xa kukho ingxoxo yeqela, babephethe. Xa bebona ithuba lokuwongwa, balingenisa. Xa befuna ubungqina, bayicela.
Igunya lithathiwe, alinikwanga. Kuqwalaselwa kuphela. Ukuba inye into onokuyifunda kumaphulo kaTrump kunye noSanders, yile. Akukho namnye kumajelo eendaba aqhelekileyo nakwiziko lezopolitiko elakha lafuna ukuba aba bagqatswa babini basebenze. Abagqatswa khange bakhathalele- bathathe igunya. Kwaye, uluntu lwaluqonda ngayo.
Umntu endisebenza naye usandula ukugxeka esidlangalaleni UGary Vaynerchuk esidlangalaleni. Kwakungekho kwakha, akayithandi nje indlela yakhe kunye nomyalezo kaGary. Oko wasusa isithuba, kodwa ndongeze ingxelo enye: UGary Vaynerchuk akakhathali nokuba ucinga ntoni. UGary akalindelanga ukuba abonwe yile nkokeli yecandelo, uGary wayithatha. Kwaye ukwanda kwegunya lakhe kunye nokuqina kwakhe bubungqina bokuba igunya lilifanele.
Nazi ke iingcebiso endingathanda ukuzinika abantu abanetalente kwaye abonwabileyo:
Yiba ngumntu ozithandayo -Andithethi ukuthatha kwabanye kwaye andithethi nokuba ndiyeke ukunceda abanye. Kuya kufuneka unerekhodi enomtsalane yokwakha igunya lakho. Kodwa kuya kufuneka uthathe ixesha emsebenzini wakho, kwaye wenze inqaku lokuzisebenzela. Cinga ngegunya lakho elizayo njengeakhawunti yomhlala phantsi. Awunakho ukuthatha umhlala phantsi ngaphandle kokuba uzincama namhlanje. Kuyafana nangegunya lakho. Awuzokwakha igunya ngaphandle kokuba utyale ixesha kunye nomzamo namhlanje. Ukuba usebenza iipesenti ezili-100 zexesha kumqeshi wakho okanye kubathengi bakho, awutyali mali kuwe. Musa ukulindela ukwamkelwa. Yiya kwintetho yakho elandelayo… nokuba awukabinabaphulaphuli. Yiya ubhale incwadi. Yiya ukuqala ipodcast. Yiya ngokuzithandela ukuze ube kwiqela lenjongo. Yiya strongarm umcimbi ukuba uthethe. Ngoku.
Yiba nesibindi -Ukunxibelelana kunzima, ukuluqonda kubalulekile. Ndisebenzisa iingxelo zokubhengeza ezixhaswe ngamava am. Ndiyayazi into endiyenzayo kwaye ndicacisa njalo. Ndihlala ndayalela iintlanganiso (hayi kuba ndibathiyile) kuba andisebenzisi amagama anje ingayiyo, Ndiyacinga, singa, njl. andicimi magama, andixolisi, kwaye andibuyeli umva xa ndicelwa umngeni. Ukuba umntu othile undicela umngeni, impendulo yam ilula. Makhe siyivavanye. Ayikuko kuba ndicinga ukuba ndiyazi yonke into, kungenxa yokuba ndizithembile kumava am.
Nyaniseka - Andiqondi ukuba yintoni andazi. Ukuba ndicela umngeni okanye ndibuze olwam uluvo kwinto endingaqinisekanga ngayo, ndiyayiyeka incoko de ndenze uphando. Uvakala ngelizwi eligunyazisiweyo, "Makhe ndiphande ngaloo nto, andazi." okanye "ndinomntu endisebenza naye ogxile kuloo nto, mandimyeke." Kunokuzama ukubhambabhula indlela yakho ngempendulo apho uzama ukuvakala ubukrelekrele. Awudlali mntu xa usenza njalo. Ukuba awuchanekanga, kuyafana… yamkele kwaye uqhubeke.
Yahluka - Wonke umntu is eyahlukileyo. Ukuzama ukwamkeleka kuya kukwenza ukuba ulunge. Uya kufihlwa phakathi kwabo bonke abanye abantu abangenalo igunya kunye nokwamkelwa okukungqongileyo. Yintoni eyahlukileyo ngawe? Ngaba yinkangeleko yakho? Uburharha bakho? Amava akho? Nokuba yeyiphi na, yithabathe inotshi njengoko uziveza kwabanye. Andimde, ndityebile, ndingwevu… kanti abantu bayandimamela.
Lumka -Amathuba akujikelezile. Kufuneka uhlale ulumkile kubo. Ndiphendula phantse kwisicelo ngasinye esenziwe ngqo kum sokuba kwi-podcast okanye ndinike isicatshulwa senqaku loshishino. Ndifuna amathuba Iinkonzo zokucela ubuntatheli. Ndingenisa amagqabaza ngamanqaku acelomngeni andivumelani nawo okanye ndinikezela ngombala owongezelelweyo xa amanqaku engaphelelanga.
Musa ukoyika -Ukuba ligunya akuthethi ukuba uyathandwa ngumntu wonke. Ngapha koko, ngokuzibeka phambi kwabanye uya kuba lixhoba labo bangavumelaniyo. Ukuba bendimamele wonke umntu ongavumelaniyo nam ubomi bam bonke, ngekhe ndiye ndawo. Ukuba bendizama ukuthandwa ngumntu wonke, ndingangeniswa kwigumbi lezengqondo. Ndihlala ndabelana ngebali likaMama wam. Ukuqala kwam ishishini, intetho yakhe yokuqala yayiyeyokuba, "Oh Doug, uyakuyifumana njani i-inshurensi yezempilo?" Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ungqine abo ubathandayo gwenxa.
Ekugqibeleni, isitshixo segunya kukuba kukuvili lekamva lakho, hayi omnye umntu. Ulifanelwe ngokupheleleyo igunya okholelwa ukuba unalo… kodwa awunakho ukuhlala phantsi ulinde abanye ukuba bakuqonde de ube ulithathile. Nje ukuba wenze utyalomali, uya kwamkelwa. Kwaye xa usaziwa ngabanye-ude ugxekwe-usendleleni.
Ndizimase umboniso ovela kumangalisa U-Ellen Dunnigan (ngokuqinileyo, Ukugxininisa kwiShishini, arekhode ividiyo kule post) kwaye wanikezela ngothotho lweengcebiso malunga negunya lokwakha. Ifuna ukuba nobabini nizimisele kwaye nizimisele kwindlela yenu yoku zonke ithuba lokuyalela igunya. Ndingakucebisa ukuba ulandele ifemi ka-Ellen kwimidiya yoluntu nakwi-YouTube, uya kufunda itoni! Mqeshe ngokuqinileyo kwaye uya kuguqulwa.
tags: PhawulaIgunyangesibindiigunya lokwakhaumahlukouDonald trumpgary vaynerchukgary veeNya nisekaUkuthetha esidlangalaleniNdithathatrump